Siyaasi Ka Tirsan Xisbiga Garabka Midig Ee Faransiiska Oo Oo Diinta Islaamka Qaatay | Hawraar
Siyaasi Ka Tirsan Xisbiga Garabka Midig Ee Faransiiska Oo Oo Diinta Islaamka Qaatay
Mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu fir fircoon, Xisbiga Xag-jirka ah ee garabka midig loogu yeedho dalka Faransiiska, ayaa qaatay diinta Islaamka, waxaanay taasi ku keentay in xisbigaasi go’aan deg deg ah ka qaato oo xilalkii uu ka hayay xisbiga iyo xubin nimadii xisbiga laga xuyuubiyay labadaba.
Masuulkan oo lagu magacaabi jiray Maxwan Poti, da’diisana lagu sheegay sodon jir ku dhawaad, waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii xisbiga National Front Party uga soo baxay, doorashadii golaha degaanka ee dalka Faransiiska, waxa kale oo uu ka mid ahaa xubnaha ugu fir fircoon, ee sida wayn u raadeeyay dadwaynaha.
Afhayeen u hadlay xisbigan oo warbaahintu waydiisay, sababta haddii uu ninkaasi diinta Islaamka qaatay, xisbiga looga saaray, isla markaana xilkii uu ka hayay looga qaaday, ayaa sheegay in sababtu aanay la xidhiidhin, diinta islaamka ee uu qaatay, balse xisbigu go’aankan qaatay, ka dib markii ninkaasi uu xubnaha kale ee xisbiga ay ka wada tirsan yihiin gaar ahaan saaxiibadii, u diray fariimo uu kaga codsanayo inay la eegaan Islaamka ama diinta cusub ee uu qaatay.
Qaar ka mid ah fariimihii ninkani u diray saaxiibadii oo warbaahinta Faransiisku daabacday, ayaa dhamaantood muujinaya, ogaysiis uu saaxiibadii ugu sheegayo inuu diinta Islaamka qaatay, iyo xog waran uu ka siinayo, waxyaabaha mucjisada ah ee diinta Islaamka uu ku arkay, kuwaas oo uu qaarkood ka codsaday inay la eegaan.
Mudanahan ayaa sidoo kale waraaqaha uu saaxiibadii u diray waxa uu kaga codsanayay, in fahamka khaldan ee ay Islaamka ka aaminsan yihiin dadka badankoodu, la xidhiidho aqoon la’aan reer galbeedka ka haysata, kala saarista, kooxaha islaamiyiinta xag jirka ah iyo usuusha diinta Islaamka ee saxda ah.
Isku soo wada duubo, sida ay warbaahinta dalka Faransiisku ku warantay, masuulkan ayaa kaliya danbiga xisbigu xubin nimadii kaga saaray iyo sababta ka cadhaysiisay kaliya la xidhiidhaa inuu qaatay diinta Islaamka oo kaliya, mana jirto cid uu wax u dhimay, waxaana sida wararku sheegayaan, iyaga laftoodu si adag uga cadhooday talaabada laga qaatay, saaxiibada ay wada xidhiidheen oo waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha loo jeedinayo.